OFX Umzantsi Melika Evolution FSX & P3D
kubalulekile OFX Umzantsi Melika Evolution FSX & P3D
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #559 by Ace9
Kokuhlawula intlawulo Jumbo ukulayisha "OFX Umzantsi Melika Evolution FSX & P3D" iyandixhalabisa kutheni Antivirus bam ukuchola i qwa virus kwaye ngokundivumela ukuba ukuvula ifayile exe.
Avast Iingxelo Win32: Evo-GEN
Nabani na uyazi ukuba kwayo intsholongwane lokwenene?
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #560 by Gh0stRider203
Rog, nto avast ukuba intengiso * ck. Yiloo nto wawuyeka ukuba. positives ezininzi kakhulu ubuxoki. Ndakhe kusetyenziswa rikoooo ixesha elithile bangaze inkwenkwe intsholongwane enye.
ukuba kuhle ukuya Nto yakuzixhalisa malunga
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: Ace9
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #562 by Dariussssss
ubala yonke lol ...
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #566 by Ace9
Mna ke ndimmisile waza waya Stanley (Falklands) kwaba efanayo njengoko FTX Base indawo, ndiya ukhangele config kunye OFX Umzantsi Melika iba phezulu kuluhlu ngabaphambili kuphela Ushuaia Airport ngaphezu kwayo. Ingaba kukho into ndiya yalahleka kwaye ngaphezu exe inkqubo lokulayisha, ezifana isicwangciso OFX config?
Ixesha ukwenza page: 0.290 imizuzwana